Ndikatema Umhandara waMaria – 2hove
musha / chechi / Mary / Ndikatema Umhandara waMaria
Nei VaKaturike vanodavira Mariya akaramba ari mhandara, apo Bhaibheri rinoti Jesu aiva nevanun'una nehanzvadzi?
uye, nei umhandara yaMariya kukoshesa vaKaturike?
Mhinduro iri nyore: VaKaturike vanodavira Mariya akaramba ari mhandara hwose nokuti ichokwadi. Zviri dzidziso kwazvo akaziviswa Church kwaKristu, “mbiru nehwaro hwechokwadi” (ona aPauro First Tsamba Timothy 3:15); azivisa kuburikidza Tradition Sacred; uye agreeance neMagwaro Sacred (ona aPauro Tsamba Yechipiri kuvaTesaronika 2:15).
saka, MaKatorike tenda kuti “Hama nehanzvadzi kwaIshe” vanotaurwa muBhaibheri vaiva pedo-ukama hwaJesu, asi kwete nevanin'ina (sezvo isu tichati muudzame pazasi).
Pakupedzisira, uye Chikurusa, Mary ndikatema Umhandara kunokosha kuna chiKristu nokuti chii rinosimbisa nezvaJesu. pakupedzisira, kudavira izvi zvinoratidza utsvene Kristu uye kuti kusiyana zimukadzimu: kuita Mwari achiva murume.
Muprofita Ezekieri akazivisa muchinda “achabuda, uye pashure pokunge abuda pasuwo rinofanira kugara rakapfigwa” (ona Ezekiel 46:12), uye Chechi anonzwisisa ichi kuva Munongedzo kuberekwa kwaKristu uye kwoupenyu hwose umhandara kwaMariya (ona Saint Ambrose, Kugadzwa Mhandara 8:52). saka, zvakanga zvakakodzera kuti Mary kuti arambe hwake pashure kwaJesu nokuti ani Iye: Mwari muchimiro chomunhu!
neMagwaro, mumwe kuti kufungisisa pamusoro nyaya Mozisi raipfuta. Sezvo Mosesi akaswedera mugwenzi, Ishe akati, “Usaswedera; bvisa shangu dzako patsoka dzako, nekuti nzvimbo yauri yaumire inzvimbo tsvene” (Exodus 3:5).
nyaya iyi kunotibatsira kunzwisisa raMariya ndikatema Umhandara nenzira mbiri.
Chekutanga, tinoona kuti pasi mutsvene nokuti kuvapo kwaShe akanga aburukira ikoko. Hatifaniri kukanganwa kuti izvi Mwari chete, uyo akazviratidza kuna Mozisi ari raipfuta, agamuchirwa mudumbu raMariya.
saka, zvingadai chete kuti zvakakodzera kutaura kuti iye, saizvozvo ivhu dzvene Exodus, aifanira ritsveneswe, zvikurukuru kugadzirira, ndiko, kugamuchira Mambo wamadzimambo naIshe wamadzishe.
Chepiri, vanaBaba veChechi akaona mufananidzo mugwenzi raipfuta pachayo–pegwenzi enguva, asi risingatsvi–somunhu dimikira asununguke waMariya pasina nokurega hwake. Semuyenzaniso, muzana remakore rechina, Gregory weNyssa akanyora, “Chii chakanga chakafanofananidzirwa panguva iyoyo mumurazvo mugwenzi hwakaratidzwa pachena muchakavanzika Mhandara. … Sezvo mugomo gwenzi richipfuta asi rakanga risingatsvi, saka Virgin akabereka chiedza uye haana uori” (On Kuberekwa kwaKristu).
Zvikurukuru, Mary ndikatema Umhandara rinozivisa kuti nyika kuti nekuti Kristu akanga mutsvene–Mwari pachake–Zvaiva zvisina kukodzera kuti iye dzisingadi mudumbu yomukadzi munhuwo; uye, zvakafanana, kuti vatadzi vabva iroro chizvaro pashure pake–chizvaro zvikuru kugadzirira kutakura Mesiya. zvakare, funga Ezekiel, “[muchinda] achabuda, uye pashure pokunge abuda pasuwo rinofanira kugara rakapfigwa.”
Mary umhandara panguva yokuberekwa raJehovha zvinoratidzwa muporofita Isaya, uyo anoti, “tarirai, mhandara ichava napamuviri, ichabereka mwanakomana, achadaidzwa zita rake Emanueri” (7:14; ona Matthew 1:23 uye Luke 1:27). Isaiah, shure kwezvose, rinotsigira umhandara wake yokubereka uye mu bheyaringi. Uyezve. Mary akatii, kune Ngirozi Huru kuti chiziviso aizobata pamuviri uye ichabereka mwanakomana–“Izvi zvingava sei sezvo handizivi murume?” (Luke 1:34)–zvakajeka zvinoratidza kuti aiva mhandara. Her maitiro zvakaoma musoro zvimwe.
Her kuchingobvambura virginal mamiriro chinorehwa muna Song of Solomon, iyo inoti, “A munda rakakiyiwa ihanzvadzi yangu, mwenga wangu, tsime rakafunhirwa” (4:12).
Tinofanira kunzwisisa ichi kwakapiwa kuti iye naJosefa vakanga wakanyengwa uye akazoroora? Kune tsika yekare inoti Mary wakatsaurirwa kuna Jehovha somunhu mhandara vakazvitsaurira kubvira paucheche; uye kuti kana achisvika pazera akapiwa kuna Joseph, mumwe murume akura zvikuru kupfuura iye (cf.. Protoevangelium waJakobho).
Pfungwa dzakachena mukati muchato pasi zvimwe ezvinhu, chaizvo, yemubhaibheri pfungwa. Semuyenzaniso, muna First muBhuku reMadzimambo 1:4, Mambo David anotora musikana, Abhishagi, kuti ave mukadzi wake kumutarisira akwegura, asi abstains kubva naye.
Uyezve, kwake First Tsamba vaKorinde, Pauro akakurudzira mumamiriro kusawana zvitsvene kana nokusingaperi Nokuvimbisana kuroorana kune vaya vanogona kubvuma (ona 7:37-38).
zvakajeka, muchiedza chake vanodana kutakura Mwanakomana waMwari, muchato Mariya naJosefa akanga kure zvavo. It wakagadzwa naMwari nokuda nokutarisirwa uye kudzivirirwa Mhandara uye noMwanakomana Wake–kuchengeta zimukadzimu yakavigwa kubva nyika kwenguva. “The umhandara waMariya, varo kusununguka, uyewo rufu rwaShe, vakanga kuvanzwa muchinda wenyika ino,” akanyora Ignatius muAndiyoki, mudzidzi mupositori, munenge mugore 107: “–zvakavanzika matatu akadanidzira, asi vakabata runyararo rwaMwari” (Tsamba kuvaEfeso 19:1).
mu Matthew 1:19, MuMagwaro Matsvene anotiudza Jospeh akanga “murume akarurama.” saka, wakati anzwa Mary akava mwana nomumwe, atsunga agomuendesa chinyararire kumurwira kubva fungidzira kuurayiwa pasi poMutemo waMosesi (sezvo pa Deuteronomy 22:23-24).
Ishe akapindira, Zvisinei, achimuudza achishandisa ngirozi muchiroto, “Usatya kutora mukadzi wako Mariya, nekuti icho chakaumbwa maari ndecheMweya Mutsvene; iye uchabereka mwanakomana, uye iwe unofanira kumutumidza kuti Jesu, nokuti achaponesa vanhu vake pazvivi zvavo” (Matthew 1:20).
Joseph haana kutora mashoko aya anoreva, Zvisinei, kuti Mariya akanga ave mudzimai wake vanhuwo pfungwa shoko. Sezvo Saint Ambrose kuti Milan akanyora,
“Harinawo mutsauko chero kuti Rugwaro runoti: 'Josefa akatora mukadzi wake akaenda kuIjipiti’ (Matt. 1:24; 2:14); nokuti mukadzi upi yakange yatsidza kuwanikwa nemurume anopiwa zita mukadzi. Hazvina kubva nguva kuti muchato kunotanga kuti nevakaroorana mazwi Anoshanda. Harisi deflowering mhandara kuti anoita muchato, asi dzimba kondirakiti. Hazvina kana musikana anogamuchira joko muchato kunotanga, havana kana iye anosvika pakuziva murume panyama” (Akazvitsaurira Mhandara uye muone Umhandara kwaMariya 6:41).
Akabereka Mwanakomana waMwari akaita wake wokutanga wako Mutsvene (pa Luke 1:35); uye Josefa akanga zvairambidzwa muMutemo kuti ukama hwevakaroorana pamwe mumwe nomumwe.
Zvakadini “Hama nehanzvadzi kwaIshe?”
Chekutanga, zvinofanira ambopupura kuti pane ngozi iri mavhesi Rugwaro kubva akapoteredza yose Rugwaro. Chokwadi Jesu anopa Mariya mupositori John, semuyenzaniso, ari chiratidzo simba Haana kuva chaidzo varumudzani (ona John 19:27). Nokuti kana Mariya aiva nevamwe vana, Jesu angadai asina kubvunza mumwe munhu kunze mhuri kumutarisira. (An nharo pamusoro ichi kuwana mamwe traction mu Evangelical yeChina ndiyo pfungwa Jesu akaronzesa Mariya John nokuti Jakobho waIshe zvimwe “hama” vakanga vasati vaKristu. Asi nharo uku tenuous. Kana izvi zvaiva zvakadaro, nezvatingatarirsire Evhangeri kupa vamwe tsananguro izvi. Chokwadi Jesu anopa Mariya John pasina tsananguro inoratidza Mary akanga asina vamwe vana.)
sei, ndokubva, tiri kududzira ndima dzakadai Matthew 13:55, umo vanhu vazhinji Handimupinduri, “Uyu haasi iye mwanakomana womuvezi? Ko Mariya ndisingazikamwi kuti mai vake uye James, Joseph, Simon naJudhasi nehama dzake? Ko, hanzvadzi dzake nevavakidzani vedu?”
The Catholic nzvimbo kuti izvi “hama” uye “hanzvadzi” vaiva hama dzepedyo, akadai hama, asi kwete nevanin'ina, anobvumirana netsika dzechiJudha yekare yavachashevedzera munhu hama “hanzvadzi konama” (pa Genesis 13:8; 14:14; 29:15, and unto.). Sezvo Pope John Paul Mukuru akanyora, “Zvinofanira akayeuka kuti hapana chaizvo izwi iripo muchiHebheru uye nechiAramaiki kuratidza shoko 'muzukuru', uye kuti munin'ina shoko rokuti '’ uye 'hanzvadzi’ saka zvaisanganisira madhigirii wandei ukama.”1
Uyezve, zviri kumwewo kunoratidzwa Matthew kuti “James naJosefa” vaitova vanakomana yakasiyana Mary, vamire navamwe vakadzi mujinga pamuchinjikwa pamwe Magadharena kuguva mangwanani Easter (27:55-56; 28:1).
Izvi zvimwe Mary nevakawanda kuva mukadzi waKiropasi, uyo angangodaro ane babamunini Jesu (ona John 19:25; onawo Eusebius, History of Church 3:11).2 It kuudza, uyezve, kuti Ishe “hama” patinorairwa muMagwaro anonzi vanakomana Mary, Jesu kazhinji anonzi (ona Matthew 13:55; maka 6:3, and unto.).
Pane dzimwe Evhangeri ndima mbiri kuti vavengi yaMariya ndikatema Umhandara runowanzotaurwa: Matthew 1:25 uye Luke 2:7.
Matthew 1:25 inoti Joseph “haana kurara naye chero nguva asati akabereka mwanakomana.” Sezvo Ludwig Ott akatsanangura mune Kunyatsogona Catholic Dzidziso, Zvisinei, ndima iyi “dzika(S) kuti kusvika ronga nguva yokuroora akanga haumunyungidzwe, asi kwete nenzira ipi kuti zvakanzi munyungidzirwa pashure ichi” (Tan Books, 1960, pp. 207). Vavariro Matthew 1:25 chaiva wokusimbisa kuti Jesu akanga asina baba vapanyika, uye zvechokwadi aiva Mwanakomana waMwari. It aisafanira kureva chinhu pamusoro Josefa naMariya ukama pashure Jesu’ pakuberekwa. Funga Second Book raSamueri 6:23, iyo inoti Mary “wakange asina mwana kusvikira zuva rokufa kwake.” pachena, izvi hazvirevi aiva mwana pashure wake rufu. mu Matthew 28:20, Jesu anovimbisa kuva nevateveri vake “kusvikira pakuguma kwenyika.” zvakare, izvi hazvirevi Iye richaguma kuva navo mhiri iyoyo.
mu Luke 2:7, Jesu anonzi kwaMariya “dangwe.” zvisinei, sezvo Pope John Paul akatsanangura:
“Shoko 'dangwe,’ rinoreva 'mwana asina pashure mumwe’ uye, pachakwo, haatombotauri nezve nezvokuvapo nevamwe vana. Uyezve, ari Evangelist inosimbisa unhu ichi Child, sezvo vamwe zvavanofanira zvakakodzera kuti mutemo wechiJudha dzaibatanidzwa pakaberekwa mwanakomana wedangwe, pasina kana mai ingangodaro abereka vamwe vana. Saka ose mwanakomana chete aiva pasi nachiremba izvi nokuti akanga 'kwekubereka kutanga’ (cf.. Luke 2:23)” (“The Church rinoratidza Mariya 'Ever Virgin'”)
Michael O'Carroll, uyezve, Zvinonzi, “The Jewish kuvigwa IAA muIjipiti, kudanana kubva muzana remakore rokutanga, … kunobatsira kupindura chokuramba kwaMariya nokusingaperi umhandara yakavakirwa St. Kushandisa yaRuka shoko 'dangwe’ (prototokos) (2:7). Kuti shoko haana kureva vamwe vana kunoratidzwa kushandiswa kwayo iyi nyaya kutsanangura mukadzi uyo akafa pashure pokuberekwa kwomwana wake wokutanga, vasingagoni pachena kudai vamwe” (cheTheotokos: A Theological Encyclopedia woWakaropafadzwa Mariya, Michael Glazier, 1982, pp. 49).
Sei vanaBaba veChechi Iti?
Sezvo mativi ari nharo pamusoro Mariya isingaperi Umhandara, aifarira uye game, kuti reMagwaro zvikonzero kutsigira nzvimbo yavo, sei isu kuona uyo zvakarurama? Ndiani nokududzira Rugwaro nemazvo, zviri zvechokwadi yevaapostora nzira?
Imwe nzira kutsigira kuti bvunza nhoroondo zvinyorwa chiKristu vekare, soMunyengetero zvakanyorwa veChechi Early.
Clement wokuAlexandria, semuyenzaniso, pakutanga remakore rechitatu akanyora, “Amai ichi oga akanga asina mukaka, nekuti iye oga haana kuva mukadzi. Iye pakarepo vose Virgin uye Mother” (The Murayiridzi of Children 1:6:42:1).
Clement kwakaita mboni, mabviro, yokutanga emakore remakore iroro, kwakaratidza kuti Mary “wakange asina mumwe mwanakomana asi Jesu” (Tsanangudzo iri John 1:6). kumwewo, akanyora, “Uye ndinofunga kuti zvinoenderana chikonzero kuti Jesu chibereko chekutanga pakati pavanhu kuchena randinogara mune dzakachena, uye Mary pakati pavakadzi; nokuti havana vaizviita kuti ipai chero pane wake chibereko chekutanga umhandara” (Tsanangudzo iri Matthew 2:17).
Pamwe ake zvokushamisira rumbidzo nokuda kwake, Athanasius (D. 373) yakarondedzera Mariya “Ever-Virgin” (Discourses Uchirwisana evaArian 2:70).
munenge 375, Epiphanius akapikisa, “Pakanga nokusingaperi munhu upi maberekero uyo akamboda kutaura zita Holy Mary, uye uchibvunzwa, haana pakarepo wedzera, 'Mhandara?'” (Panarion 78:6).
“Chokwadi,” akanyora Pope Siricius mu 392, “isu hatigoni kuzviramba kuti Noruremekedzo Your zvakanga zvakakwana kodzero achimutsiura pamusoro mamakisi vana vaMariya, uye kuti imi vaiva nechikonzero chakanaka kuti vakavhunduka panguva pfungwa kuti mumwe kuzvarwa kuti ngaateme kubva chete virginal chizvaro iyo Kristu akazvarwa nenzira yenyama” (Tsamba Anysius, Bishop vokuTesaronika).
Ambrose akatsinhira mu 396, “Tevedzera naye, vanaamai vatsvene, uyo maari Mwanakomana vadikamwa chete kusimuka zvikuru muenzaniso zvinhu kunaka; nokuti kana imi vana atapire, uyewo haana Mhandara vanotsvaka kunyaradzwa kukwanisa kutakura mumwe mwanakomana” (Letters 63:111).
Augustine weHippo (D. 430) akadaro, “A Virgin pamuviri, Mhandara kubereka, Mhandara pamuviri, Mhandara ichibereka, Mhandara nokusingaperi. Seiko kushamisika ichi, O murume? Zvakanga zvakakodzera kuti Mwari anofanira kuberekwa kudai, kana iye deigned kuva murume” (Sermons 186:1).
Pope Leo Guru akazivisa 449, “Agamuchirwa Mutsvene mukati mudumbu Virgin Rake Mother. Akamuvigira kunze kurasikirwa umhandara, kunyange sezvo pamuviri naye pasina kurasikirwa kwayo” (Kwandiri 28). Kumwewo ari papa akanyora, “Nokuti Mhandara pamuviri, Mhandara bhowa, uye Mhandara iye akaramba” (Mharidzo Mutambo Wokuzvarwa 22:2).
saka, Ko tinowana nhoroondo chamazuva nedzidziso iyi kubva pamakore kutenda mangwanani kusvika nhasi.
ona “The Church rinoratidza Mariya 'Ever Virgin;'” L'Osservatore Romano, Weekly Edition mu Chirungu, Gunyana 4, 1996. ↩
“An nharo pamusoro ichi, Zvisinei,” akaona Karl Keating, “ndiko kuti James ari kumwewo (Mt 10:3) se waArifiyosi, izvo zvingareva kuti Mary, ani akanga, aiva mudzimai vose Kadzimu uye waArifiyosi. Imwe mhinduro ndechokuti aiva chirikadzi kamwe, ipapo vakaroorazve. More Zvimwe waArifiasi Kadzimu (WaKiropasi muchiGiriki) ndivo chete munhu, sezvo rechiAramaiki zita waArifiyosi aigona kuitwa muchiGiriki munzira dzakasiyana, kana sezvo waArifiyosi kana waKiropasi. Chimwe chaunogona kuti waArifiyosi akatora zita rechiGiriki rakafanana zita rake rechiJudha, nzira kuti Sauro akatora zita Paul” (ChiKaturike uye Fundamentalism, Ignatius Press, 1988, pp. 288). ↩